खेलकुद Archives - Juneli Daily
सलाहाको भविष्य क्लबको हातमा??
एजेन्सी । लिभरपुलका प्रशिक्षक योर्गेन क्लोपले फरवार्ड मोहमद सलाहाले क्लब छाड्ने दाबीलाई अस्विकार गरेका छन् । लिभरपुलका स्टार सलाहाले एनफिल्ड क्लब छाडेर स्पेनिस महारथी क्लब बार्सिलोना वा रियल मड्रिड जाने चर्चा छ...	Read more »
पोचिटिनोकाे चर्चा पीएसजीमा
टोटेनहमका पूर्व प्रशिक्षक मौरिसियो पोचिटिनोलाई पेरिस सेन्ट जर्मेन (पीएसजी)को नयाँ प्रशिक्षकको मुख्य दाबेदार मानिएको छ । पीएसजीले मुख्य प्रशिक्षक थोमस टुचेललाई बर्खास्त गरेसंगै पोचिटिनोको नाम चर्चामा छ । प्राप्त जानकारी अनुसार पीएसजीका...	Read more »
टाइसन र जोन्सबीच को खेल बराबर
बक्सिङका पूर्व हेविवेट च्याम्पियन माइक टाइसन र रोय जोन्स जुनियरबीचको भिडन्त बराबरीमा सकिएको छ । अमेरिकाको लस एन्जलसमा आइतबार भएको भिडन्तमा टाइसन र जोन्सले ‘ड्र’ खेलेका हुन् । टाइसन र जोन्सबीचको प्रदर्शनी...	Read more »
इन्टरमिलान छाड्ने एरिक्सनले???
ईन्टर मिलानका मिडफिल्डर क्रिस्टियन एरिक्सनले अर्को महिना क्लब छोड्ने भएका छन् । ईटालीमा जम्न संघर्षरत देखिएका एरिसक्नले सिरि ए क्लब छाड्ने भएका हुन् । उनी गत जनवरीमा प्रिमियर लिग क्लब टोटेनहमबाट ईन्टर...	Read more »
क्लब विश्वकपको तालिका सार्वजनीक: फिफा
फिफा क्लब विश्वकपको खेल तालिका र खेल्ने स्थानको घोषणा गरिएको छ । सन् २०२० को क्लब विश्वकप कोरोना महामारीका कारण स्थगित बनेको थियो । नयाँ तालिका अनुसार कतारमा सन् २०२१ को फेब्रुअरी...	Read more »
पियम कपको लागि छानिए यी महिला खिलाडी :प्रदेश २
काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री कप राष्ट्रिय महिला क्रिकेट प्रतियोगिताका लागि प्रदेश २ ले खेलाडी छनोट गरेको छ । प्रदेश २ ले बुधबार महिला पीएम कपको लागि १४ खेलाडी छनोट गरेको हो । प्रदेश...	Read more »
क्लब लाईसेन्स ब्यवसायीक फुटबलको सुरुवात
काठमाडौं । अखिल नेपाल फुटबल संघ (एन्फा)का अध्यक्ष कर्माछिरिङ्ग शेर्पाले एएफसीको क्लब लाईसेन्स ब्यवसायीक फुटबलको सुरुवात भएको बताएका छन् । एन्फा अध्यक्ष शेर्पाले विभागीय टिम आर्मीले प्राप्त गरेको एएफसी क्लब लाईसेन्सलाई घरेलु...	Read more »
प्रिमियर लिग अन्तर्गतको खेलमा आजराति लिभरपुल र चेल्सी भिड्दै, कसले मार्ला बाजी !
JD — September 20, 2020 add comment
इंग्लिस प्रिमियर लिगअन्तर्गत आइतबार राति चेल्सी र साविक विजेता लिभरपुलबीच प्रतिस्पर्धा हुँदैछ। खेल नेपाली समयअनुसार राति पौने ९ बजे चेल्सीको मैदानमा हुनेछ। दुवै टिमले लिगको सुरुवाती खेलमा जित हात पारेका थिए। लिभरपुलले...	Read more »
आज दिल्ली क्यापिटल्सको खेल हुँदै, सन्दिप खेल्न पाउलान् त?
१३ औँ संस्करणको इन्डियन प्रिमियर लिग (आईपीएल) अन्तर्गतको दोस्रो खेलमा नेपाली लेग स्पीनर सन्दीप लामिछाने आबद्ध टिम दिल्ली क्यापिटल्सले आज किङ्स इलाभेन पञ्जाबको सामना गर्दैछ। खेल साँझ ७:४५ बजे दुबई अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट...	Read more »
छैटौं पटक बायर्नकै हातमा च्याम्पियन्स लिग…
JD — August 24, 2020 add comment
लिस्बन — जर्मन च्याम्पियन बायर्न म्युनिकले आइतबार छैटौंपल्ट युरोपेली च्याम्पियन्स लिग जितेको छ । फाइनलमा उसले फ्रान्सको पेरिस सेन्ट जर्मेन (पीएसजी) लाई १–० ले पराजित गर्‍यो । खेलको निर्णायक गोल किंग्सली कोमनले...	Read more »